Ricardo Kaka Oo Ka Sheekeeyey Dhibaatooyin Uu Kala Kulmay Jose Mourinho, Bannaankana Keenay Wanaagga Shaqsiga Ah Ee Cristiano Ronaldo – Cadalool.com
Ricardo Kaka Oo Ka Sheekeeyey Dhibaatooyin Uu Kala Kulmay Jose Mourinho, Bannaankana Keenay Wanaagga Shaqsiga Ah Ee Cristiano Ronaldo
Halyeyga reer Brazil ee Ricardo Kaka ayaa markii ugu horreysay ka hadlay waayihiisii Real Madrid iyo qaybtii uu Jose Mourinho ka qaatay inuu ku fashilmo, isla markaana uu soo bandhigi kari waayo awooddiisa ciyaareed.
Kaka oo waraysi siiyey telefishanka Grande Circulo de SporTV ayaa waxa uu sheegay in laba dhibaato ay iskugu darsameen waqtigiisii Real Madrid, kuwaas oo kala ahaa Jose Mourinho iyo dhaawacyo.
“Dhibaatooyinkii igu helay Madrid way ahaayeen kuwa socda, markii dambena Mourinho ku darsamay. Saddex sannadood oo aan joogay waxa aan isku dayayey inaan qanciyo Mourinho si uu fursad ii siiyo laakiin dookhiisa ayay ahayd (in aanu ciyaarsiinin), manay ahayn wax gacantayda ku jira.” Sidaas ayuu yidhi Kaka.
“Sannadkii hore, dhaawacyo ayaa i helay, waxaanan galay qalliin, lix biloodna waan ka maqnaa garoomada. Markii aan soo laabtayna waxaan u imid Mouirnho.” Ayuu ku daray.
“Waxa aan ahaa xirfadle wanaagsan, maantana wax wanaagsan ayaan ka sheegan karaa tebisstaydii Madrid, albaabaduna mar walba way ii furnaayeen. Florentino na wuxuu ii sheegay inaan ka mid ahay ciyaartooyadii ugu wanaagsanaa ee abid kooxda yimid.”
Markii uu Real Madrid yimid Carlo Ancelotti oo beddelay Jose Mourinho, waxa Ricardo Kaka lagu wargeliyey in ciyaaryahanno da’yar lagu soo kordhinayo kooxda oo ay adag tahay inuu fursad helo, taasna waxay ka hor timid qorshihiisii ahaa inuu Koobka Adduunka ciyaaro, doorashada kaliya ee uu haystayna waxay ahayd inuu ka dhaqajiyo Bernabeu.
“Xili ciyaareedkii 2013/14, waxa yimid Carlo Ancelotti. Florentino waxa uu doonayey inuu kooxda ku cusboonaysiiyo ciyaartooyo ka yimid kulliyada da’yarta iyo laacibiin cusub, Ancelotti na warka wuu ii caddeeyey.
“Wuxuu ii sheegay in madaxweynuhu weydiistay inuu ciyaarsiiyo laacibiintaas, aniguna waxaan u sheegay inaan doonayo inaan ciyaaro sababtoo ah, waxa aan rabay inaan ka qayb-galo Koobka Adduunka, dookha kaliya ee aan haystayna inaan tago ayay noqotay.” Ayuu yidhi
Dhinaca kale, Kaka waxa uu ka hadlay kulan uu magaalada Manchester kula yeeshay Jose Mourinho xilli ay xayaysiin ku samaynayeen, halkaasna waxa ku dhex maray sheekooyin, waxaana isaga oo ka hadlaya uu yidhi: “Waxa aan Manchester u tegay xaflad xayaysiin ah, waxa aan degay hotelkii uu ku jiray, muddo laba saacadood ah ayaanu sheekaysanaynay. Mourinho xaqiiqadii waa sida aad shaashadaha ka aragtaan, waa nin aad u caqli badan, aad u diyaarsan, waxyaabaha aad ka aragtaan waraysiyadiisana waa kuso uu soo diyaarsaday.”
Geesta kale, waxa uu Ricardo Kaka bannaanka keenay deeqsinimada iyo waxyaabaha cajiibka ah ee uu ka arkay Cristiano Ronaldo intii ay wada joogeen Real Madrid, waxaanu yidhi: “Waa qof si cajiib ah usoo jiita qof kasta, dadka qolka lebbiskuna way garanayaan sida uu yahay. Waxa aanu joogtay Los Angeles ciyaarihii saaxiibtinimo, qof ayaanu ka dalbaday inuu usoo iibiyo 15 telefoonka gacanta ah, kaddibna wuxuu u qaybiyey shaqaalihii kooxda. Waa binu-aadam, mar walbana wuu i caawin jiray oo i dhiirigelin jiray, waligayna dhibaato dhexdayada kama iman intii aanu wada joognay.”